Hery Rajaonarimampianina : Mitohy ny asa fanarenana na dia eo aza ny savorovoro politika -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : Mitohy ny asa fanarenana na dia eo aza ny savorovoro politika
21/07/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tsy mitsahatra ary mitohy hatrany ny asa fampandrosoana izay tanterahina hoy ny Filoham-pirenena malagasy Hery Rajaonarimampianina nandritra ny fandaharana fotoam-bita izay fanaony isaka ny zoma, nambarany tamin’ izany fa tsy voatery mitsahatra ny asa fampivoarana na dia ankatoky ny fifidianana isika amin’ izao fotoana izao. Dimy isan-jato ny fitomboan’ny harikarena amin’ ity taona ity, ary anisan’ny ambony aty Afrika io hoy ny filoham-pirenena malagasy, io taha io dia nambaran’ ny filoha fa azo ampitomboina tsara noho ny ezaka fanarenana izay efa natao .
Ho voafehy ihany koa ny fiakaran’ ny vidim-piainana tsy hihoatra ny valo isan-jato na dia teo aza ny fiakaran’ ny vidim-bary lavareny tamin’ ity taona ity hoy hatrany ny fanazavana izay nomen’ny filoham-pirenena malagasy. Maro ny olana izay natrehina teto amin’ ny firenena, ny hain-tany, tondra-drano ary teo ihany koa ny aretina pesta, saingy tsy nahasakana ny firosoana izany fa dia nitohy hatrany ny fanatanterahana ny asan’ny vinan’ ny fisandratana. Nametraka lamina maharitra amin’ ny ho avy isika hoy ny Filoha, ary teo ihany koa ny lamina ho amin’ ny ho avy izay napetraka dia ny fotodrafitrasa izany, saingy tsy hadino ihany kosa ny asa ankehitriny hoy ny Filoha nanamarika.
Anisan’ny fotodrafitrasa amin’ny ho avy sy fototry ny fampandrosoana izao ny fanatanterahana ny seranam-piaramanidina lehibe izay nambaran’ny filoha malagasy fa ireo firenena izay nahazo faleovan-tena niaraka tamin’ i Madagasikara dia maro no efa lasa lavitra ary manana fiaramanidina ampolony. Ankehitriny raha ny asa fanamboarana ny seranam-piaramanidina no jerena dia ny 60% ny asa no efa vita, ary tsy ny eny Ivato ihany fa eo ihany koa ny any Nosy-be, tanjona mantsy hoy ny filoha ny hahatongavana mpizaha tany maro ahafahana mampiditra vola vahiny. Dimy hetsy noho izany ny mpizahatany hotratrarina, noho izany dia tokony hifanaraka amin’ izany ny asa ataon’ireo rehetra mitrandraka io sehatra io, ary anisan’izany ny filaminana. Tsy ireo seranam-piaramanidina ireo ihany anefa no asiam-panamboarana ahafahana manatanteraka izany fampandrosoana izany hoy ny filoha Hery Rajaonarimampianina fa eo ihany koa ireo seranam-piaramanidina madinika ahafahana mitatitra entana sy hifamezivezena tahaka ny any Maroantsetra, Mananara Avaratra, Antalaha, Maintirano sns… ho ary fomba ihany koa .
Anisan’ny tetikasa goavana manamarika ny fitondran’ny filoham-pirenena hoy izy ny fanamboarantsika ny seranan-tsambon’ i Toamasina ho maoderina. Tsy hohadinoina ihany koa hoy izy ny fanamboarana ny fiantsonan’ireo taxiborosy etsy Andohatapenaka sy ny eny Ambohimanambola, dia lalana na rocade miisa efatra mirefy 37 kilometatra no vita ahafahana miala amin’ ny fitohanan’ny fiara sy hampalalaka ny fifamezivezena. Ho an’ i Madagasikara iray manontolo dia 65% ny faritra manana tanjaka ara toe-karena no hiala amin’ny fitokana- monina , hisokatra mandavan-taona ihany koa hoy ny filoha ny lalana hifamezivezena ho an’ ny 60% ny kaomina. Izay rahateo no tratra mandritra ity taona 2018 ity, ary efa voasoratra anatin’ny tetibolam-panjakana ny ho enti-manana. Ho an’ny fanalana fahasahiranana any Atsimo kosa dia lavadrano miisa 25000 no ho tratra amin’ ity taona ity hahazo rano ny mponina, tsy hohadinoina ny fanomezana fotodrafitrasa roa ho an’ i Toliara. Fanorenana amin’ny ho avy izany hoy ny Filoha, ary azo hitsarana ny ezaka vita ara-toekarena, manaporofo izany ny faniriana te hampandroso. Tsy adinon’ ny filoha moa ny mikasika ny herinaratra, na io amin’ ny angovo azo havaozina na ny toho-drano toa ny any Ranomafana , Sahofika, Mahintsy,Volobe, Antetezam-bato sns, sady hanatsarana ny tolotra izany hoy ny filoha no hampidinana ihany koa ny saran’ny famokarana herinaratra amin’ izao fotoana, ka hamerina indray ny JIRAMA ho orinasa tsy maty antoka intsony.
Misy ny asa natomboka hanarenana ny toe-karena sy ny sosialin’ny mponina, fotodrafitrasa lehibe maharitra sy mirindra ireny hoy hatrany ny filoha, mitsara sy mijery ny asa vita ny sehatra iraisam-pirenena. Noho izany dia afa-po ny FMI raha nankatoavin’izy ireo ny herinandro teo ny andiany fahatelo eo amin’ ny fandaharan’asa ho an’ ny FEC. Nivoaka ny famatsiam-bola mitentina 44 tapitrisa Dolara hanohanana an’i Madagasikara eo amin’ ny famatsiana ara-toekarena sy ara-bola. Tsy izany no tanjona hoy ny filoham-pirenena fa mila fanohanana ny tetikasa lehibe hanarenana ny toe-karena. Azo atao ny mahaleo tena miandalana raha miezaka avokoa ny rehetra anatin’ny fitoniana, misy fepetra ny famatsiam-bola ary mila fahamailoana izany. Maro ny asa izay efa notontosaina hoy ny filoha eny anivon’ ny kaomina toa ny fanarenana sekoly sy ny lalan-kely maro samihafa. Mitohy ny asan’ny filoham-pirenena, ary misy ny asa izay natao no tsy hita izao dia izao, ny asa vita fa misy ny ho hita afaka kelikely. Mitohy ny asa ataon’ny filoha hoy izy na dia eo aza ny savorovoro politika.